वाह! हाम्रो सरकार क्या 'स्मार्ट' छ! :: Setopati
वाह! हाम्रो सरकार क्या 'स्मार्ट' छ!
माधव चौलागाईं madhavjee@gmail.com
साईकललाई फुर्सदको सदुपयोग तथा यातायातको साधनको रुपमा प्रयोग गर्दा सामाजिकस्तरमा हाशिल हुने बहुआयामिक फाइदाबारे व्यापक सचेतना बढाउने उद्धेश्यले गत अप्रिल १२, २०१८ का दिन १९३ सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा संयुक्त राष्टसंघ महासभाको ७२ औं नियमित सेसनले हरेक वर्ष जुन ३ तारिखलाई ‘विश्व साईकल दिवस’ को रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।
इतिहासमै पहिलो 'विश्व साईकल दिवस' संसारभर आज अर्थात जेठ २० गते विभिन्न गतिबिधिसहित मनाईने छ। योसँगै साईकलिङ्ग गतिबिधिको प्रवर्धनले नयाँ आयाम पाउने छ।
साईकलिङ्गले समग्र सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र नभई मानवीय सन्निकटता बढाउने भएकोले सबैतिरबाट यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रुपमा लिईएको छ।
हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनले मे महिनामा बसेको विश्व स्वास्थ्य महासभामा प्रस्तुत गरेको 'शारीरिक गतिविधि कार्य योजना २०१८ – २०३०' ले पनि मानव जीवनमा साईकलिङ्गले दिने बहुआयमिक लाभका कारण उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
साईकलको बढ्दो प्रयोगले समग्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अतुलनीय योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ। किनकी, यो आफैंमा भरपर्दो, किफायती र हितकारी मध्यम हो।
दिगो विकास लक्षका १७ मध्ये कम्तिमा १२ वटा लक्ष्य हासिल गर्न साईकिलिङ्गले प्रत्यक्ष योगदान गर्छ। कम ठाउँ लिने, कम खर्चिलो र उर्जा खपत नगर्ने विशेषता नै आधुनिक मानव समाजको निम्ति अपरिहार्य छ।
यसले स्वास्थ्यमा ल्याउने फाइदाले त यो झन् एक हितैषी साधन प्रमाणित नै भैसक्यो ।
विश्व साइकल दिवसबारे चर्चा गर्दा विकासमा साइकलको भूमिकाबारे अध्ययन गर्ने पोल्याण्डका प्रोफेसर लेस्शेक सिविल्क्सी छुटाउन नमिल्ने नाउँ हो जसले 'सबैको लागि दिगो गतिशिलता' अभियानको सहयोगमा राष्ट्रसंघ सभाबाट यो दिवस पारित गर्न सफल भए । तीन वर्षअघि उनले लेखेका दुइटा ब्लग ‘साइकल सबैको चासो हो’ र ‘किन बाईसाईकलको विश्व दिवस छैन?’ बाट सुरु भएको प्रयास अन्ततः गत नोभेम्बरमा तुर्किमेनिस्तान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ सभामा लिएपछि सार्थक बनेको हो।
साइकलिङ प्रयोगका फाइदा
आर्थिक समृद्धि र भौतिक सुबिधा बढेसँगै मानिसको रहनसहन र आहारबिहार भएको परिवर्तनले जीवन पद्धतीलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
बिशेषगरि शारीरिक व्यायामको अभावमा चुलिरहेका नसर्ने रोगहरू रोकथामका लागि उत्तम उपाय मध्ये साइकल एक हो।
यसको नियमित प्रयोग गर्न सके कम खर्चिलो, भरपर्दो र सहज यातायातको माध्यम हुन सक्छ। छोटो दुरीको लागि दैनिक प्रयोगमा इन्धन बालेर चल्ने मोटर जडित साधनको उत्तम विकल्प हुनसक्छ। जसको कारण इन्धनमा खर्च हुने अर्बौं रकम विदेशिनबाट जोगिन सक्छ।
यसको प्रयोगले वातावरण स्वच्छ राख्न मद्दत पुग्छ र फलस्वरूप दीर्घ तथा घातक रोगबाट करोडौं मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ।
त्यसैगरि साइकलले खेलकुद तथा असल प्रतिस्पर्धा प्रबर्धन गराउन मद्दत गर्छ। मानिसलाई रचनात्मक बनाउन सक्छ भने सामाजिक सम्बन्ध बिस्तारमा पनि प्रभावकारी योगदान गर्न सक्छ।
त्यसबाहेक साइकलको प्रवर्धनले टिभी तथा मोबाइलको अत्याधिक प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी सकृय र स्वास्थ्य जीवन बाँच्न पनि सहयोग गर्न सक्छ। यसको व्यवस्थित र प्रभाकारी प्रयोगले दिगो यातायातको आधार स्थापित गर्न सक्छ।
नेपालमा साईकल संकृति
मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधनको प्रभुत्व बढ्नुअघि नेपालको तराई, प्रमुख शहरहरु र उपत्यकाहरुमा बस्ने मानिसहरुको लागि साइकल जीवनको अभिन्न पाटो थियो।
हरेक परिवारमा मेलापात, हाट बजार आवतजावतको प्रमुख साधनको रुपमा साइकल हुन्थ्यो। स्कुल र क्याम्पस जीवनमा साइकल सबैको सपनाको साधन बनेर बसेको थियो। मोटर इन्जिनले चल्ने साधनको आगमनसँगै साइकल गरिबहरूको साधन झैं बन्न गयो।
विस्तारै आर्थिक उन्नति गर्नेहरु आफ्नो घरको साईकल त्यागेर त्यो ठाउँमा स्कुटर, मोटर साइकल वा गाडी राख्नुलाई सामाजिक प्रतिष्ठा जस्तो ठान्न थाले। फलस्वरूप हाम्रा शहर र बस्तिहरु प्रदुषित हुने दर बढ्दै गयो।
नेपालमा मात्रै हैन यो अवस्था विश्वभरि नै देखिएको छ। पछिल्लो दशकबाट जब हावा, हरियाली, सुन्दरता र स्वस्थ जीवनमा समस्याहरु देखापर्न थाले, साइकलबारे बिस्तारै चर्चा बढ्न थाल्यो।
तै पनि, साइकललाई फुर्सदको सदुपयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य जीवनको माध्यम बनाउने चलन भर्खरै सुरु हुन लागेको मान्न सकिन्छ। घुम्ने प्रयोजनका लागि ठमेल, झम्सिखेल र पोखरामा बिदेशी पर्यटकहरुलाई भाडामा दिन राखिएका स्पोर्ट बाईक वा माउन्टेन बाईकहरु हेरेर रमाउनुबाहेक आम नेपालीहरुमा ती साइकल किन्न सक्ने हैसियत अझै कमै छ।
विगतमा केही विदेशीहरु साहसिक यात्रामा प्रकृतिको काखमा हराउने गरी साइकल लिएर नेपालका शहर कुनाकन्दरा घुम्न आउने गरेका थिए। सन् १९८३ तिरै दुई जना बिदेशी यात्रीले सगरमाथा बेशक्याम्पसम्म साइकल चढेर पुगेका थिए भने नेपालीमा सन् १९८८ मा सोनाम गुरुङ त्यहाँ पुगेर इतिहास बनाएका छन् ।
खासगरी यो सताव्दीको सुरुवातबाट नेपालमा फाट्टफुट्ट मौसमी साइकल गतिबिधि बढेको पाइन्छ। छिटपुट रुपमा ट्राएथलन , क्रसकन्ट्री रेश, डाउन हिल, कोरा, हेरिटेज राइड, टुर डे लुम्बिनी, जनकपुर, सिन्धुली, पोखरा जस्ता संगठित र प्रतियोगितत्मक कार्यक्रम हुने गरेका छन्।
तीबाहेक कतिपय कर्पोरेट क्षेत्रले प्रायोजन गरेर सेवा र वस्तु प्रवर्धनका लागि साईकल र्‍याली आयोजना पनि हुने गरेका छन्। तर यी सबै रहर र निजी प्रयासबाट भइरहेका छन्।
युवापुस्ता माझ साहसिक खेलको रुपमा पनि साइकलले प्रवेश पाईसकेको छ। यो दशकको सुरुमा पुष्कर शाहको विश्व साइकल यात्रा, सगरमाथा, आरोहणले नेपाली समाजमा साइकल प्रतिको दृष्टिकोण बदल्न र चर्चा बढाउन उल्लेख्य योगदान गरेको मान्न सकिन्छ।
सन् २०१५ को नाकावन्दी र पेट्रोलियम पदार्थ अभावले नेपालमा साइकल संस्कार भित्रिन अतुलनीय योगदान पुर्याएको थियो। आम मानिसको जीवनमा साइकलले पुनः प्रवेश पायो। साइकल बिक्रिको दर पनि ह्वात्तै बढ्यो।
घुमफिर मात्र होइन दैनिक सवारी साधनको रुपमा प्रयोग गर्नेहरु बढे। संकटको बेला परनिर्भरता कम गर्न निकै मद्दत भयो।
एक प्रकारले वास्तवमा साइकलले देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान कायम राख्न गरिएको आन्दोलनलाई निकै योगदान दियो।
अचेल बिदाको सदुपयोग गर्ने, स्वास्थ्यलाभ गर्ने, वातावरण प्रेमी, सामाजिक उत्तरदायित्वको समझ राख्नेहरु साइकललाई साधनको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।
सोसल मिडिया र स्मार्ट फोनको प्रयोग बढेसँगै त्यहाँ पोष्ट गरिने साइकल यात्राका रोमाञ्चक र सुन्दर तस्विर तथा अनुभवले संजालमा जोडिएका हरुलाई उत्प्रेरित गरि रहेको पाइन्छ।
साईकलिङ विस्तारको अपरिहार्यता
यद्यपी औपचारिक रुपमा सरकारी तबरबाट साईकलिङ्गको विकास र विस्तारको ठोस प्रयास भएको पाईदैन। सन् १९९५ मै नेपाल माउण्टेन बाईक एसोसिएसन गठन भए पनि त्यति प्रभावकारी भएन।
यसलाई पछि २००६ मा नाम परिवर्तन गरि नेपाल साईकलिङ एसोसिएसन राखियो। यो देशकै खेलको सम्बर्धन गर्ने हैसियत भएको ओलम्पिक कमिटि अन्तर्गतको एउटा संगठन भए पनि निस्प्रभावी झैँ देखिन्छ।
यसको वर्तमान समिति गत अप्रिलमा चुनिएर कार्यरत छ। सरकारको पर्यटन बोर्डले छिटपुट भनसुनको आधारमा केही साईकल र्यालीहरुमा कर्मकाण्डिय प्रयोजन गर्ने बाहेक कुनै प्रवर्धानात्मक कार्यक्रम राखेको पाइदैन।
हरेक स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले 'स्मार्ट सिटी' बनाउने सोच राखेका छन् । विकसित देशका स्मार्ट सिटीहरुमा साईकल लेन हुनु अनिवार्य जस्तै छ। हामी आशा गरौँ नेपालका स्मार्ट सिटीहरु पनि साईकल मैत्री हुनेछन्।
सरकारले साइकल आयातमा ६ प्रतिशत कर लगाउँछ। आम मान्छेमा साइकलको पहुँच बढाउन त्यो हटाउन जरुरी छ । र सरकारले रेल-सपनाहरु जस्तै 'साइकल-सपना' साकार पार्ने प्रतिवध्दता गर्नु स्वास्थ्य, वातावरण, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले बढी महत्वपूर्ण छ।
सहरका बाटोहरुमा साइकल लेन राख्नु यो उपयुक्त समय पनि हो, खासगरी खडक बिस्तार भएका ठाउँहरूमा दुई वा तीन फीट बाटो छुट्याउनु सहज पनि छ । यो हेक्का होस् - साइकलमा गरेको लागानीले रेल वा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानी भन्दा निकै सस्तो र अधिक र द्रूत प्रतिफल दिने छ। किनकी, साइकल प्रवर्धनले प्रदुषण घट्छ, स्वच्छ वायु दिन्छ। स्वस्थ र सवल नागरिक दिन्छ । त्यो आहिलेका भोटरलाई मात्र हैन भविष्यका सन्ततिको निम्ति गरिएको अति महत्वपूर्ण योगदान ठहरिने छ। अनि भन्न मिल्ने छ 'वाह, हाम्रो सरकार त क्या 'स्मार्ट' छ।’
(लेखक एक साइकलप्रेमी हुन्)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १९, २०७५